वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई ठग्ने क्रम रोकौं :: Nami News :: वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई ठग्ने क्रम रोकौं
वाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई ठग्ने क्रम रोकौं
पछिल्लो समय पर्यटकीय सिजन सुरु भएको छ । केही सातायता पर्यटकको चाप ह्वात्तै बढेको छ । विभिन्न मुलुकका पर्यटकहरु नेपाल घुम्न आउने क्रम सुरु भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र चलायमान भएको छ ।
यता, सरकारलाई पनि पर्यटक आँउदा निकै फाइदा हुन्छ किनकी उसले नेपाल आँउदा कर तिर्ने गर्दछ । विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएनन् भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पर्छ । डलर भित्रिने एक मात्र प्रमुख स्रोत भनेको पर्यटक हो।
कोरोनाका कारण विगत दुई वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठप्प जस्तै बनेको थियो । हालै मात्र पर्यटकहरुको आगमन सुरु भएको छ । विदेशी पर्यटकहरु नेपाल घुक्न नआउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै असर देखियो । त्यस्तै, तरलता पनि स्वाट्टै बढ्यो । मँहगीले पनि नेपालीको ढाड सेकेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यथावत राख्ने एउटै मात्र उत्तम उपाय भनेको नै विदेशी पर्यटकलाई जतिसक्दो नेपाल भित्र्याउँनु हो । जति पटक नेपाल घुम्न आउछन् राज्यलाई उत्ति नै फाइदा हुन्छ ।
तर, राज्यले अनुगमन नगर्दा विदेशी पर्यटकहरु ठगिएका छन् । जुनसुकै क्षेत्रबाट विदेशी नागरिकहरु ठगिएका छन् । होटल व्यवसायी र यातायात व्यवसायीले उनीहरुलाई सक्दो लुटिरहेका छन् । एक सय रुपैंया पर्ने मालालाई पाँच सयमा बेचिरहेका छन् पसलेले । होटल व्यवसायीले तीन सय पर्ने खानालाई हजार रुपैंया ठोकेका छन् । नेपालीले पाँचसय रुपैंया भाडा तिर्ने उही बाटोमा पन्ध्रसय तिर्न बाध्य छन् विदेशी नागरिक ।
एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै विदेशी पर्यटक ठगिने सुरु हुन्छ । एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीबाट सक्दो ठगिने गर्दछ। एयरपोर्टभित्र सञ्चालन भएको पसलहरुले पनि त्यस्तै गर्छन् । ट्याक्सी चालकले पनि जुनचाहि होटलले कमिशन दिन्छ उही होटलमा लगेर राखिदिन्छन् ।
विदेशीलाई ठग्दा केही सिमित व्यक्तिलाई फाइदा भएको होला तर राज्यको साखमाथि दाग लागेको छ । उता, राज्यले यसबाट भोलिको दिनमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । यहाँबाट ठगिएर गएका विदेशी पाहुनाहरुले आफ्नो मुलुकमा गएर नेपालले चर्चा–परिचर्चा गरिहाल्छन् ।
आफू ठगिएको कुरा आफ्ना मुलुकवासीलाई अवश्य पनि सुनाउँछन् । जसको कारण उक्त देशका पाहुनाहरु नेपाल नआउन सक्छन् । यसबाट घाटा त राज्यलाई नै भयो । हामीहरु ‘अतिथि देवो भव’ भन्छौ तर सकेसम्म उनीहरुलाई नै ठग्छौ। केही दिनअघि ठमेलको एउटा होटलको छतबाट खसेर एकजना विदेशीको निधन भयो ।
त्यसैगरी, ट्रेकिङ गर्न जाँदा, विभिन्न ठाँउमा घुम्न जाँदा उनीहरुको अकालमा ज्यान गएको घटनाहरु थुप्रै पाइन्छन् । विदेशी नागरिकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसक्दा पर्यटकको आगमनमा कमी आउने देखिन्छ । जुनसुकै पनि विदेशी नागरिकको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । चर्को शुल्क तिरेर मर्नका लागि विदेशीहरु नेपाल आएका हुन्नन्। यसविषयमा सरकारले विचार पुप्याउनु पर्दैन् ? सरकारले अभिभावकत्वको दायित्व निभाउनु पर्दैन् ? पर्यटकहरुको ज्यान र धनको सुनिश्चिचता गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारी पक्षको लापरवाही हुँदा नेपालमा विदेशी नागरिक नै आउन ठप्प हुने अवस्था बन्न सक्छ ।
बाटोमा पर्यटकहरुको सामान चोरी हुँदा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? व्यापारीहरुले मनलाग्दी पैसा लिएर उनीहरुलाई ठग्दा सरकार कहाँ छ ? व्यापारीहरुले अहिले जतिसक्दो ठगिरहेका छन् भोलि यसको परिणाम अवश्य पनि देख्नेछन्। विदेशी नआउदा व्यवसायीहरुलाई पनि उत्तिकै घाटा छ । राज्यलाई त राजश्व नआउदा पनि व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प हुन्छ । पर्यटक नै नआएपछि कसलाई सामान बेच्ने ?
अहिले विदेशीहरु पाइलै पिच्छे ठगिएका छन् । यसलाई बन्द गराैं । विदेशीलाई यसरी नै ठग्ने हो भने यसको प्रतिफल व्यापारीहरु आफैले भोग्नुपर्छ । सरकारले पनि व्यवसायीहरुलाई ठग्न छुट दिने हो भने नेपालको अवस्था जटिल बन्दै जान्छ।
होटल व्यवसायीले लिइरहेको मनलाग्दी रेटमा सरकारले रोक लगाउनु पर्दछ । यता, टुर एण्ड ट्राभल्स कम्पनीहरु पनि सरकार कै निगरानीमा चल्नु पर्दछ । सम्बन्धित निकायले खाने, लाउने, चढ्ने सबै कुराहरुको मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्ने देखिन्छ । पाहुनालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ यो सबै नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
विदेशी पाहुना भन्ने बित्तिकै हामीहरु ऋाफू नखाएर पनि उनीहरुलाई खुवाउछौ । आफू भुइँमा सुतेर उनीहरुलाई ओछ्यानमा सुताउँछौ । तर, विदेशीको हकमा किन समान व्यवहार गरिदैन ? विदेशी एक जनाको मात्र नभई हरेक नेपालीको पाहुना हो । उनीहरुलाई राम्रो बोली वचन गर्नु भनेको धर्म गरे सरह नै हो । केही व्यापारीहरु विदेशी ठगेर धनी भएका होलान् । तर, नेपाल ठग देश हो भन्दा त हाम्रो बेइज्जत भइरहेको छ । केहीले ठगेका छन् तर दोष भने सबै नेपालीले सराबरी बोकेका छन् । सरकारले पुराना ऐन कानुन संशोधन गरेर विदेशीहरुलाई सक्दो सेवासुविधा दिनुपर्छ । जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । पर्यटकहरु हाम्रा निम्ति भगवान सरह हुन् । उनीहरु आएनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ ।
होटल व्यवसायीले विदेशी नआउदा हामीलाई घाटा भयो भनेर पटकपटक सरकारलाई दबाब दिन्छन् । तर, आएको विदेशीलाई राम्रो व्यवहार गर्नु पप्यो, ठग्न छोड्नु पर्यो । एकचोटि नेपाल आइसकेका पर्यटक दोस्रो पटक नेपाल घुम्न आउन चाहदैनन् । किनकि सबै ठगी व्यवसायीबाट उनीहरु आजित भइसकेका हुन्छन् ।
होटल व्यवसायीहरु सरकारको ऐन कानुन पनि नमान्ने, आफुखुशी मनलाग्दी रेट राख्ने । राम्रो सेवा सुविधा नदिने तर शुल्क भने चर्को लिने । पाइलैपिच्छे ठगिने मुलुकमा को घुम्न आउन चाहन्छ ?
केही वर्ष यता होटेलमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । विज्ञापन गरेर पाहुना बोलाउछन् । तर, विज्ञापन दिएको दररेट समेत पाहुनाबाट असुल्छन् । अनि त्यस्तो ठाउमा दोहोर्याएर को जान्छ ? होटेल व्यवसायीको नियत र चर्तिकला सबैले बुझिसकेका छन् । अझ, रात्रिकालिन व्यवसायीहरुले विदेशीलाई ठग्नु ठगेका छन् । नेपालीहरुलाई लुट्नु लुटेका छन् ।दोहोरी साँझ, डान्स बार र रेष्टुरेण्टले स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई दिउँसै मुर्गा बनाइरहेकाका छन् । बाहिर पाँच सय पर्ने सामान पन्ध्र सयसम्ममा बेच्छन् ।
पाँच तारे होटेलदेखि लिएर एउटा सानो खाजाघरले समेत आमनागरिकलाई ठगिरहेका छन् । मनलाग्दी पैसा लिएर लुट्न सरकारले छुट दिएको छ ? न सरकारले होटलहरुको वर्गीकरण गरेका छन् न खानेकुराको शुल्क नै निर्धारण ? खाजा घरहरुले दर्ता नगरीकन पसल सञ्चालन गर्छन् । ठूल्ठूला पाँच तारे होटलहरुले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । दुईतिरबाट राज्य राजस्वविहिन बनिरहेका छन् ।
राज्य असफल र आमनागरिक बाध्य । लज भाडाबाट पनि सबैजना ठगिएका छन् । पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैंया तोकिएको छ । तर, त्यो मँहगो हो कि सस्तो ? सरकार र तिर्ने मान्छे दुवै अनविज्ञ छन् । शुल्क भने यत्रो तिर्नुपर्छ तर सेवासुविधा भने गयगुज्रिएको छ । फोहोर, केही सेवा सुविधा नभएको लज भाडा यत्रो महँगो हुँदा पनि सरकार मौन बसेको देखिन्छ । यता, खाना पकाउने ठाँउ कस्तो छ ? सफासुग्घर कतिको छ ? सरकारले आजसम्म पनि अनुगमन गरेको छैन् ।
स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने गरी फोहोरी ठाउमा खाना पकाउँदा पनि सरकारी पक्ष चुइक्क बोल्दैन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरु बढ्दो छ । आफ्नै मुलुकको विभिन्न जिल्ला घुम्न जाने क्रम बढ्दो छ । आफ्नै काम विशेषले पनि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि बस्ने र खाने ठाँउ त होटल नै हो । होटलमा अंग्रेजीमा राखिएको मेन्युले पनि कतिपय ग्राहकलाई समस्यामा पारेको छ ।
अंग्रेजी नबुझैकै कारण उनीहरुले धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ । मेन्यु अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा राखिएको हुनुपर्छ ।विदेशी मात्र होइनन् स्वदेशी पर्यटक पनि विभिन्न व्यवसायीबाट ठगिएका छन् । नयाँ ठाउँ सबैका लागि नौलो हुन्छ । त्यहाँको परिवेश बुझ्न विदेशीलाई मात्र होइन् स्वदेशीलाई पनि गाह्रो पर्छ । जसका कारण स्वदेशी र विदेशी पर्यटक दुवै ठगिएका छन् ।
पर्यटकको खाँचो कति हुँदो रहेछ भन्ने शिक्षा श्रीलंकाबाट सिकौं । अहिले श्रीलंकाले विदेशी पाहुना तान्नका लागि विभिन्न नयाँ नयाँ उपाय ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्ने भएपछि अष्ट्रेलियाले पनि सबै मुलुकका विद्यार्थीहरु धमाधम भित्र्यायो। तर, नेपालबाट आएका पर्यटकहरुलाई लखेट्ने काम भइरहेको छ । यसको क्षति सबैले बेहोर्नु पर्नेछ ।
सरकारले यस विषयमाथि बेलैमा सोचविचार गरेर पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न योजना बनाउनु पर्छ । भएका पर्यटकहरु कहिले नेपाल छोडेर जालान् जस्तो व्यवहार देखाउँछन् व्यवसायी । तर, सरकारलाई यसविषयमाथि कुनै मतलब गर्दैन्।
- अनुषा थापा, भक्तपुर
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १३, २०७९ ११:४९